၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သော အိမ်သုံးမီတာ ၊ စီတီမီတာ ၊ Meter Box နှင့် Ring CT များအား Item အလိုက် မြန်မာကျပ်ငွေ (Kyat) ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-
1-1 (T) /MESC / 2019-2020
၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပို ရေးရှင်း အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သော အိမ်သုံးမီတာ ၊ စီတီမီတာ ၊ Meter Box နှင့် Ring CT များအား Item အလိုက် မြန်မာကျပ်ငွေ (Kyat)ဖြင့်ဝယ်ယူရန်
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ( ၂၇ . ၉ .၂၀၁၉ ) ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး ( ၂၈ . ၁၀ .၂၀၁၉) ရက် (၁၂:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။တင်ဒါပုံစံ နှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။